साउदीमा नेगेटिभ, खोटाङमा पोजेटिभ ! रुपाकोटमा सिलबन्दी – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/साउदीमा नेगेटिभ, खोटाङमा पोजेटिभ ! रुपाकोटमा सिलबन्दी
साउदीमा नेगेटिभ, खोटाङमा पोजेटिभ ! रुपाकोटमा सिलबन्दी
काठमाडौं । कोरोना संक्रमितहरु भेटिएपछि खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ का केही स्थानहरु अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएका छन् ।
जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि वडा नम्बर २ को अलछेढुंगा हुँदै बेंसी टोल नेर्पा जाने बाटोको डाँडागाउँ साकेलाथानसम्म दायाबाँया १०० मिटरभित्र पर्ने क्षेत्र/बस्ती सिल गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकुमार राईले जानकारी दिए ।
सहायक प्रजिअ राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा आवत–जावतमा पूर्णरुपमा बन्देज लगाउने निर्णय भएको छ । दिक्तेल बजारमा बिहान ६ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा तरकारीको पसलहरु मात्र खुला गरी अन्य व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
उनका अनुसार दिक्तेत बजारभित्र कुनै पनि निकायहरुबाट घरघरमा पुगेर दिने सेवा वा घुम्ती सेवासमेत बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार सो नगरपालिकामा कुल चारजना संक्रमित फेला परेका छन् ।
एकजना साउदी अरेबियाबाट पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आएका थिए । रुपाकोट आएपछि पाँच दिनपछि उनको आरडीटी जाँच गरिएको थियो, त्यसमा पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो । तर, उनीबाट संकलन गरिएको स्वाबबाट पीसीआर जाँच गराउँदा पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । र, गाउँमा त्रास बढेकाले सिलबन्दी गर्नुपरेको हो ।
त्यसैगरी रुपाकोटमा भारतबाट एकजोडी श्रीमान् श्रीमती फर्किएका थिए । श्रीमती गर्भवती भएका कारण होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएको थियो । उनीहरुको पनि पीसीआर जाँच गराउँदा पोजेटिभ देखिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
Beraking news..भोलिदेखि फेरि लकडाउन गर्ने निर्णय:बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका यी क्षेत्र बन्द हुने!